महानायक राजेश हमाल कति धनी छन् ? कति छ उनको सम्पति ? – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर ०१, २०७८ समय: २०:३५:४५
आफ्नै मामा स्व. दीपक रायमाझी निर्देशित चलचित्र ‘युगदेखि युगसम्म’वाट फिचर फिल्ममा प्रवेश गरेका हमालले पहिलो चलचित्रबाटै अत्याधिक चर्चा पाए।अभिनयमा प्रवेश गर्नुअघि भारतबाट प्रकासित फेशन नेट म्यागजिनमा उनले फोटो शेसन गरेका थिए भने काठमाडौमा सम्पन्न केहि फेशन शोमा र्‍याम्प मोडलिङ समेत गरेका थिए।
१७0 बढी चलचित्रमा अभिनय गरेका हमाल पछिल्लो समय अभिनयमा त्यति सक्रिय छैनन्। एक समयका सर्वाधिक चर्चित नायक मानिने हमालका तारिफ पाउने खालका चलचित्र सार्‍है थोरै छन्।
केही महिलाहरुसँग उनको नाम जोडिएपनि उनको प्रेमप्रसंगको चर्चा त्यति भएन। ५० वर्षको उमेरमा उनले मोडल मधु भट्टराईसँग प्रेमविवाह गरेका थिए।
सानैबाट सुख सयलमा हुर्केका हमाल खासै पैसाको उनले दुख गर्नु पर्ने अवस्था थिएन। किनकि उनी राम्रो आर्थिक अवस्था भएको परिवारमा थिए। पहिला वर्षमा एक पटक घुम्नलाइ अमेरिका र बेलायत जाने हमल अहिले भने खासै जादैनन्।